Sri Lanka: Kurwiswa kwakawanda kuri kuenderera mberi, Indaneti yabviswa, Nguva yekubva pamba yakarairwa: European Union inopa rutsigiro uye nyaya yezvinyorwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Sri Lanka: Kurwiswa kwakawanda kuri kuenderera mberi, Indaneti yabviswa, Nguva yekubva pamba yakarairwa: European Union inopa rutsigiro uye nyaya yezvinyorwa
Kuputsa Kufamba Nhau • Nhau dzeBurundi • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • chengetedzo • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutevedzeri weMutungamiriri weEuropean Union, Federica Mogherini aburitsa chirevo mushure mekurwiswa kwakaitwa nemagandanga muSri Lanka mangwanani ano
Pakupera kweSvondo, kurwiswa kwakaverengwa vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevashanu vakafa uye mazana mashanu vakakuvara.
Mapurisa eSri Lanka akasunga vanhu uye ungwaru hweSri Lanka vakati vaitova nezviratidzo zvekurwiswa zvisati zvaitika.
Mumwe mukuru wehotera paCinnamon Grand, padhuze nepamba pekugara kwemukuru wehurumende, akati kuputika uku kwakapaza muresitorendi ndokuuraya munhu angangodaro.
Vanhu vanosvika zana nemakumi masere vakafa nhasi muSri Lanka, pakati pavo pavatorwa makumi matatu neshanu nhamba dzisina kusimbiswa.
Kuputika kwechinomwe kwakataurwa zvakare kuhotera padhuze ne zoo muDehiwala, kumaodzanyemba kweColombo, paine vanhu vaviri vakafa. Zoo yakavharwa. Nguva yekudzora yakatemwa kubva na18: 00 kusvika 06: 00 yemuno nguva (12: 30-00: 30 GMT).
Shiri Ranga yakavharira vezvenhau uye mameseji masevhisi munyika
Zvichiri kuitika izvi nhau dziri kuuya dzekuputika kwechisere uye kuchinjaniswa kwepfuti mudunhu reColombo reDematagoda, asi izvi hazvisati zvasimbiswa.
Nguva yekudzora yakamisikidzwa kubva 18:00 kusvika 06:00 nguva yemuno (12: 30-00: 30 GMT).
Dzakateedzana kurwisa kwakarova makereke nemahotera muSri Lanka mangwanani ano, zvichikonzera kuparara kwakanyanya. Navanhurume, vakadzi nevana, kubva kumarudzi ese ehupenyu uye kubva kumarudzi akasiyana pakati pevakabatwa, rino izuva rinosuwisa zvechokwadi kune nyika nenyika.
European Union inopa kunyaradza kwechokwadi kumhuri neshamwari dzeavo vakaurayiwa uye inoshuvira kupora nekukurumidza kune vakawanda vakakuvadzwa.
Isita Svondo inguva yakakosha yevaKristu pasi rese. Inguva yekutenda, yekurangarira, yekupemberera, uye yekunamata munamato. Zviito zvakadai zvechisimba paZuva rino Dzvene zviito zvechisimba zvinopesana nezvitendero zvese nemasangano, uye nekune avo vese vanokoshesa rusununguko rwechitendero uye nesarudzo yekunamata.
European Union inomira mukubatana nevanhu veSri Lanka nevakuru veSri Lankan panguva ino yakaoma. European Union yakagadzirirawo kupa rutsigiro.